प्रश्न मा लामो समय को लागि: "एक गर्भवती कुमारी Can" - डाक्टर एक निश्चित जवाफ दिन: "कुनै"। अब यो तदनुसार, यस्तो काम petting देखि hymen को संरक्षण, साथै गर्भावस्था गर्भावस्था रूपमा विकल्प, एक किसिम प्रदान गर्दछ, प्रश्न हालिदिए छ, र।
Hymen - योनी को खण्ड बंद र fringed संरचना छ झिल्ली एक प्रकारको, प्लग। यसको आकार अक्सर जो मार्फत रगतको outflow महिनावारी समयमा धेरै प्वालहरू भएको घन्टी छ। पहिलो यौन सम्पर्क hymen यो धेरै लोचदार छ किनभने सधैं, तोड्न सक्छ। तर यो अवधारणा र गर्भावस्था को विकास गर्न नेतृत्व गर्नेछन् जो योनी शुक्राणु मा छेद, मार्फत प्राप्त गर्न सक्छन्। तसर्थ, ब्याज एक गर्भवती कुमारी कि को प्रश्न हो जसको लागि युवा केटी, प्रत्येक, सावधान रहनुहोस् हुनुपर्छ आफ्नो पहिलो यौन सहवास। यस मामला मा गर्भावस्था को एक महत्वपूर्ण मापदण्ड एउटा स्थापित नियमित menstrual चक्रको उपस्थिति छ। तदनुसार, केवल पहिलो यौन सहवास सक्छ तापनि, प्रायजसो, अनुभव कमी, मा गर्न एक बच्चा गर्भ धारण।
गर्भावस्था को दोस्रो विकल्प, जवान केटी कुमारी पनि - आपसी स्नेह वा petting छ। यस मामला मा, योनी प्रवेश उत्पन्न गर्दैन, तर hymen मा खुलने मार्फत मानिसहरूको वीर्य स्त्रीको गरेको योनी मा प्राप्त गर्न सक्छन्। यस मामला मा, प्रश्न "Can एक गर्भवती कुमारी" जवाफ पनि सकारात्मक छ। आखिर, अभ्यास त्यहाँ प्रसब मा एक गर्भवती महिला निष्ठा र सुरक्षा मा hymen पत्ता जब अवस्थामा छन्, र बिच्छेद प्रसब समयमा हुन्छ। विशेषज्ञहरु एक महिलाको hymen यसलाई सुत्छन् गर्न सक्ने यति लोचदार छ भनेर भन्न को लिंग आकार पुरुष।
एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहिरहन्छ: "गर्भवती तपाईं चक्रको कुन दिन प्राप्त गर्न सक्छन्?" गर्भावस्था को सर्वोत्कृष्ट समय - अवधि ovulation को, जब एक छ को अन्डा बाहिर तरिका हो। Tentatively यसलाई मध्य-चक्र घोप्टो (2-3 दिन को एक सटीकता संग लिन सकिन्छ)। हरेक महिला, गणना गर्न सक्षम छ कुन दिन मा तपाईं गर्भवती प्राप्त गर्न सक्छन्। यो चक्र, चक्र अवधि को शुरुवात र अन्त्य छलफल गरिनेछ जो एक सरल क्यालेन्डर, र यौन सहवास को दिन राख्न पर्याप्त छ।
यसरी, जस्ताको तस्तै hymen केटी को उपस्थिति अवधारणा बाहिर छैन। र यो मामला मा गर्भावस्था तपाईं एक आश्चर्य रूपमा आउँछन्, तपाईं गर्भनिरोधक को सबै ज्ञात विधिहरू विचार गर्नुपर्छ। मूलतः यो एक गैर-हर्मोन एजेन्ट, मोमबत्ती र spermicides छ।
त्यसैले, वर्तमान अभ्यास रूपमा, प्रश्न गर्न स्पष्ट जवाफ "एक गर्भवती कुमारी सक्दैन" अवस्थित छैन। आखिर, त्यहाँ एक निर्देशन वा अर्को मा तराजू सुझाव गर्न सक्ने धेरै nuances छन्। त्यसैले सावधान गर्दा psevdopolovyh सम्पर्क, किनभने त्यहाँ सधैं विशेष गरी एक प्रारम्भिक उमेर मा, अनावश्यक pregnancies एक जोखिम छ।
जब जन्म दिने पछि पहिलो महिना हुनेछ?
आउँदै प्रसब को संकेत
यो प्रारम्भिक गर्भावस्था (2-3 सप्ताह) मा उड गर्न सम्भव छ? डाक्टर सल्लाह
कति चाँडो लिङ्क गर्न एलआईसी कुरा: योजना र फोटो
इन्जिन ले साइकिल अल्फा - को "चिनियाँ" बीचमा सबै भन्दा राम्रो
कसले साना व्यवसायहरूको लागि खाता विवरणहरू जारी गर्दछ। सानो उद्यमको वित्तीय विवरणहरू